कोरोना भाइरस : चीनमा पाल्तू जनावरलाई पनि मास्क - Narayanionline.com
चितवनका सातै पालिकामा काँग्रेसको विरोध सभा (फोटोफिचर)
रामचन्द्र पौडेलको व्यङग्यः ‘सभापति देउवाको तालुमा आलु फल्या, फेरि प्रधानमन्त्री बन्न बेर छैन’
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प : ८ सय जना घाइते, १५ हजार विस्थापित
कोरोना भाइरस : चीनमा पाल्तू जनावरलाई पनि मास्क
एजेन्सी, फागुन ७-
कोभिड–नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई हजार नाघेको छ ।
कोरोना फैलन सुरु भएकाे चीनमा दुई हजार एक जना र चीनबाहिरका देशमा चार जना गरी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई हजार पाँच पुगेको समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ । चीनबाहिर फिलिपन्स, हङकङ, जापान र फ्रान्समा एक/एक जनाको ज्यान गएको छ ।
बिरामीको अवस्था यस्तो छ कि पाल्तू जनावरका मालिक आफ्नो कुकुर तथा बिरालोलाई पनि फेस मास्क लगाउन बाध्य भएका छन् ।
यो भाइरसका कारण कतै आफ्नो पाल्तू जनावरलाई गुमाउनु नपरोस् भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ । उनीहरूलाई पाल्तू जनावरका कारण आफुलाई यो घातक रोग नसरोस् भन्ने डर पनि छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप अझै जारी रहेको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई खतरनाक बिमारी घोषणा गरेको छ ।
पाल्तू जनावरलाई पनि भाइरसको संक्रमण हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रमाण पेस गरेको छैन । यद्यपि चिनियाँ नागरिक आफ्नो पाल्तू जनावरलाई फेस मास्क लगाएरै घरबाहिर लैजाने गरेका छन् । चिनियाँ सोसल मीडिया वेइबोमा यसको तस्बिर भाइरल भएको छ, जसमा जनावरको आँखामात्रै खुला भएको देखिन्छ ।
कैयौं तस्बिर ट्विटरमा सेयर गरिएको छ र यो भाइरल भइरहेको छ । द सनका अनुसार चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले पाल्तू जनावर तथा कोरोना भाइरसका बारेमा डब्लूएचओको भनाइप्रति असहमति जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा महामारी वैज्ञानिक ली लन्जुआनले भनेका छन्, “यदि पाल्तू जनावर बाहिर जान्छन् र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आए भने उनीहरूलाई पनि संक्रमण हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले पाल्तू जनावरलाई अलग गर्नु आवश्यक छ । मानिसका अतिरिक्त हामीलाई अन्य स्तनधारी विशेष गरी पाल्तू जनावरसँग सावधान हुनु आवश्यक छ ।”
हङकङमा कुकुरमा पनि भेटियो कोरोना संक्रमण
कोरोना प्रभावः चीनमा चार फीट परैबाट कपाल काटिरहेकाछन् हजाम !
बिहे रोक्न आफन्तको गुहार !
दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा पसिना, ‘अशुभ’ हुने संकेत
महिनावारी भए/नभएको जाँच्न प्रधानाध्यापकले छात्रालाई कपडा फुकाल्न लगाएपछि…
यस्ती छन मुख्यमन्त्री राईको हुनेवाली ‍बेहुली,माघ ११ गते विवाह हुने
स्याङ्ग्योङ्ग कोरियन लक्जरी ब्राण्डका गाडी बेच्न चितवनमा खुल्यो शो रुम
सप्तरीमा कुटपिटबाट घाइते एक व्यक्तिको मृत्यु
कोभिड–१९ : सङ्क्रमणसँगै मृत्युको बढ्दो ग्राफ, उच्च सावधानी अपनाइँदै
आज देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो पानी पर्छः मौसमविद
सङ्कटको समयमा महत्वपूर्ण कामको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई नै दिइन्छ : गृहमन्त्री
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ३३०९ जना कोरोना संक्रमित
संसदबाट नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको खुसीयालीमा आज भरतपुरमा दीप प्रज्वलन
चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएम २० औं वर्षमा प्रवेश
आज थप २२६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७९८ पुग्यो